Maxay basasha uga ilmeysiisaa siyaasiyiinta dalka Hindiya? - BBC News Somali
16 Oktoobar 2019
Image caption Basasha iyo dhibaatooyinka ka dhasha ayaa waxay walaac ku tahay siyaasiyiin badan
Qiimaha la siisto basasha ee dalka Hindiya ayaa maalmahanba qabsaday warbaahinta dalkaas. Waxaan haddaba halkan idin kugu soo gudbineynaa sababta keentay in basasha ay laf dhuun gashay ku noqoto siyaasiyiinta dalka Hindiya.
Basasha oo caadiyan ba dalkaas looga isticmaalo sida khudaarta kale ayaa inta badan waxay dadku u arkaan inay tahay khudaarta dadka danyarta ah.
Hasayeeshee basasha dalka Hindiya oo qiimaheeda uusan marnaba fariisan sababa la xiriira sicirka suuqyada ayaa sidoo kale waxay awood u leedahay inay saameyn ku yeelato siyaasadda ee dalkaas, mararka qaarna ay galaafato mustaqbalka siyaasadeed ee siyaasiyiinta ugu tunka weyn dalkaas.
Iyadoo haddaba taas ay jirto ayaa siyaasiyiinta qaar waxay xiligan dareemayaan walaac xoogan oo kaga imanaya qiimaha aan saldhigan ee basasha.
Maxaa haddaba lasoo gudboonaaday basasha Hindiya?
Qiimaha basasha ee dalka Hindiya ayaa sare u kacay maalmihii la soo dhaafay. Qiimaha basasha ayaa cirka isku shareeray tan iyo bishii Agoost ee sanadkan oo waxaa kiiladii basasha ay gaartay 0.35 doolar, halka bisha Oktoobar na uu qiimaha kiiladii gaaray 1.13 doolar.
Siyaasiyiinta hogaamiyo xisbga talada haya ee dalkaas Hindiya, BJP ayaa si ay arrintaas wax uga qabtaan waxay mamnuuceen dhoofinta basasha, iyagoona ku rajaweynaa in tallaabadaas ay hoos u dhigi doontaa qiimaha basasha, waxaana haatan muuqata in arrintaas ay wax ka badeshay qiimaha basasha.
Suuqa ugu weyn qaaradda Aasiya ee lagu iibiyo basasha ee Lasalgaon ee gobolka Maharashtra ayaa haatan kiiladii basasha waxaa la siiyaa 0.40 doolar, hasayeeshee qof walba kuma faraxsana hoos u dhaca qiimaha ee basasha iyo tallaabooyinka ay qaaday dowladda.
Image caption Basasha Hindiya ayaa sidoo kale loo dhoofiya dalal badan oo deris la ah
Markii qiimaha basasha uu sare u kacay, waxaa ka carooday dadka danyarta ah ee dalkaas, balse sidoo kale in uu qiimaha hoos u dhaco ayaa sidoo kale waxay ka careysiisay ganacsatadii iyo beeraleydii basasha dhoofin jiray, kuwaas oo qiimihii ay siisan jireen na uu hoos u dhacay, maadaama dalka Hindiya gudihiisa oo kaliya laga isticmaalo basashooda oo laga joojiyay inay dibadda u dhoofiyaan.
Gobolka Maharashtra oo ay dhawaan kusoo fool leedahay doorashada deegaanada ayaa arrintan waxay walaac badan ku abuurtay siyaasiyiinta, oo dadka qaar ay aaminsan yihiin in mustaqbalkooda siyaasadeed ay galaafan doonta basasha.
Sidoo kale dhoofinta basaha ee Hindiya ayaa saameysay xiriirkii ganacsi ee ay Hindiya la lahayd dalalka deriska oo uu kamid yahay dalka Bangladesh.
Dalkaas oo ahaa kan ugu badan ee basasha ka dhoofsada Hindiya ayay arrintan saameysay, waxaana taas keentay in shacabka dalkaas ay iyaguna ka caroodaan sare u kaca qiimaha basasha.
Maxay basasha muhiim uga tahay dalalkaas?
Basasha ayaa shacabka dalalkaas u ah khudaarta ugu weyn ee ay isticmaalaan dadka danyarta ah, laguna daro inta badan raashinka ay dadka cunaan.
"Gobolka Maharashtra, haddii aysan jirin basal, ma awoodi kartid in aad iibsato khudaarta kale ee ay dadka cunaan, oo dadka waxay cunaan rooti lagu sameeyay basal", sidaas waxaa sheegay nin aqoon u leh cuntada oo lagu magacaabo Dr Mohseena Mukadam.
Waa xaqiiq in dallka Hindiya aad looga isticmaalo basasha, sida gobolada koonfurta iyo bariga, hasayeeshee waxaa kale oo jira qowmiyado ku nool dalka Hindiya iyo dad heysta diimo kale oo aan cunin basasha.
Basasha ayaa sidoo kale waxay caan ka tahay gobolada waqooyiga ee dalka Hindiya, halkaa oo laga soo doorto inta badan xildhibaanada barlamaanka ee dalkaas.
"Ganacsatada basasha ee waqooyiga Hindiya waxay awood ku leeyihiin dowladda federaalka, inkastoo ganacsatada kale aysan wax cabasha ah qabin, hadana haddii kuwa waqooyga Hindiya ay walaac muujiyaan waxay culeys ku noqoneysaa dowladda", sidaas waxaa yiri Milind Murugkar, oo ah cilmi-baare dhanka siyaasadda.
Basaha oo wakhti yar ku baxda ayaa waxaa dhaqaale badan ka hela beeraleyda, waxaana si aad ah ugu tiirsan dad badan oo danyar ah.
Marka uu sare u kaco qiimaha basasha, waxay sidoo kale soo jiidataa tuugada oo baabuurta waaweyn ee xamuulka ah ka xada basasha xiliyada ay ku guda jiraan safarrada ay ku soo daabulaan basasha.
Maxay siyaasiyiinta u daneeyaan ka warqabka qiimaha basasha?
Image caption Basasha ayaa waxaa ku tiirsan dad badan oo danyar ah
Qiimaha isbadala ee basasha ayaa waxay ka careysiisaa dadka danyarta ah ee codbixiyeyaasha iyo beeraleyda leh saameynta siyaasadeed.
Basasha ayaa dalka Hindiya ka ah mid xasaasi ah, waxaana sidoo kale ay saameyn ku yeelataa ololaha doorashooyinka.
Dowlad goboleedka Delhi ayaa waxaa ay soo iibsatay oo ay hadana sii iibisay basal qiimo yar, waxaana guddoomiyaha gobolkaas Arvind Kejriwal, uu sheegay in sababta arrintaas uu u sameeyay ay tahay in markale uu doonayo in la doorto.
Sidoo kale Indira Gandhi ayay shacabka dalkaas Hindiya xilka ka tureen oo ay dooran waayeen sanadkii 1980, kadib markii dowladii uu hogaaminayay loo adeegsaday hal ku dhig ahaa "qiimaha basasha iyo dhaqaalaha ayay ku guul dareysatay dowladeeda".
Sababta uu u kaco qiimaha basaha ayaa la sheegay inay ugu wacan tahay wax soo saarka beeraha basasha oo yaraada iyo daadadka ka dhasha roobabka oo haleeya dalagga markaas la filayo.
Dadka qaar ayaa aaminsan in haddii si fiican loo qorsheeyo abuurka basasha, xalna loo helo dhibaatooyinka soo noqnoqday ee haleeya basasha, sidoo kalena la sameeyo goobo lagu keydiyo laga bixi karo dhibaatooyin ka dhasha basasha ee galaafta siyaasiyiin badan.